Maradona oo sidii kubadii laad kaga soo qaaday taageere kooxda uu maamulo – SBC
Maradona oo sidii kubadii laad kaga soo qaaday taageere kooxda uu maamulo
Muscjidii hore ee kubada cagta aduunka Diego Maradona ayaa lagu qasbay in uu bixiyo raali galin uu siiyo mid ka mid ah taageerayaasha kooxda Al Wasl ee magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ka dib markii uu Maradona haraati kaga soo qaaday taageerahaasi.
Taageeraha oo boorka sidii loogu tala galay ka qaadaya
Maradona oo haatan tababare u ah kooxda Al-Wasl ayaa wuxuu ka qaaday caro ninkaasi taageeraha oo ah dhawr jeer fayday boor sawiro laga qaaday.
Diego Maradona ayaa ka carooday ninkaasi oo marada boorka ah docda kale ka joogay oo doonayey in uu eego waxa dhanka kala ka socda waxaana dhawr mar uu Maradona uu ka celiyey ninkaasi boorka hase yeeshee markii dambe ayuu haraati deg deg ah wuxuu kaga dhuftey gacanta taasi oo keentey in Maradona aad loo cambaareeyo.
“Tani waa iska dabeecadeyda, marka kasta waxaan is moodaa ciyaartody inaan ahay marna tababare, laakiin mar mar waxaanba isku qaataa inaan ahay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Alwasl” ayuu yiri Maradona.
Maradona oo haraati kaga soo qaadaya taageeraha
“Raaligalin ayaan u diyarayaa taageeraha, waxa kaliya ee aan doonayey wuxuu ahaa in la arko boorka oo uu dhawr jeer xaga dambe ka qaad qaadayey” ayuu yiri Maradona.
Ma aheyn markii ugu horeysay ee dhaqamo caynkaasi ah uu ku kacayo Maradona oo sumcadiisii kubada cagta ay hoos u dhigeen dhaqamo liifa oo ay ka mid tahay qaadashada daroogada.
Bishii January 2009 Maradona wuxuu sigaar ku dhex cabay Hotel caalami ah oo ku yaal magaalada Manchester iyadoo digniin bixiya qiiqa ee hotelka (Smoke Alarm) uu qaylo isku shareeray waxaana banaanka looga cararay Hotelka iyadoo loo qaatey in dab uu ka kacay Hotel.
Maradona oo saxaafada ka bixinaya raali galin
Xiligaasi Hotelka waxaa deganaa ciyaartoyda kooxda Chelsea oo maalintaasi la lahaa ciyaar kooxda Manchester United, waxaana mudo 40 daqiiqo ah banaanka dhoobnaa dadkii Hotelka deganaa oo dhan oo ay ka mid yihiin ciyaartoyda Chelsea iyadoo daal badan ay dareemeen xiligii ciyaarta waxaana 3-0 ku badisay Manchester Uniyted.
Maradona ayaa xiligaasi lagu eedeeyey inuu ku tala gal 7-dii subaxnimo sigaar ugu dhexcabay dabaqa 14-aad ee Hotelka isagoo lagu eedeeyey in Man United ay kulankaasi badiso iyadoo xiligaasi uu doonayey in uu eego qaab ciyaareedka xidiga reer Argantine Carols Tavez oo u doonayey in uu ku soo daro qaranka Argantine ee koobka aduunka ka qayb galayey 2010 Fifa World Cup.
Bishii February 1994-kii Madarona wuxuu rasaas ooda uga qaaday kooxo saxafiyiin ah oo ku sugneyd gurigiisa banaankiisa magaalad Buenos Aires waxaa weerarkaasi ku dhaawacay afar wariye, laba sano ka dib ayaa dambigaasi lagu soo oogay Maradona oo xukun xabsi iyo ganaax lagu soo rogay.
maradoona waa ciyar yahan sumac Dhanka ciyaraha kubada cagta iyo Darooga ka galay calamka mahan wax lala yaabo marka waa la yaabka aduunka